Axmed Karaash oo qaaday talllaabo aysan bahda garsoorku uga sii shaqaynayn xarumohooda Garoowe & sababta.
November 21, 2020 Xuseen 0
PUNTLANDTIMES (BOOSAASO)-Ku-simaha Madaxweynaha Dowladda Puntland, Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa dhagax dhigay xarunta hay’adda Garsoorka Puntland.
Munaasabadda dhaggax dhigga dhismahan cusub waxaa Madaxweyne Ku-xigeenka kala qeyb-galay xeer ilaaliyaha Guud ee DFS, Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Dowladda Puntland, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Dastuurka iyo Arrimaha Diinta, taliyaha ciidanka Booliska Puntland, Masuuliyiin ka tirsan labada aqalka ee Baarlamaanka DFS, Agaaasime Ku-xigeenka Madaxtooyada Puntland, saraakiil ka tirsan hay’addaha Garsoorka Puntland, taliyaha ciidanka Madaxtooyada iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Puntland ayaa sheegey in Puntland ay ka go’an tahay in la helo xarumo garsoor oo ku haboon Shaqada ay bulshada u hayaan, kuwaasi oo leh tayo iyo shaqo wanaagba, waxaana dhismahan cusub fulintiisaleh Dowladda Puntland.
Ku-simaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa u mahadceliyey cidkasta oo dadaal ku bixisay in la hirgeliyo, lana-helo xaruntan hay’adda Garsoorka Puntland, taasi oo muhiim u ah Dowladnimada.
VIDEO: Dowladda federalka ah oo eedayn u jeedisay maamulada qaar & M/weyne Deni oo ka jawaabey.
VIDEO: Barlamaanka Puntland oo u yeertay xukuumadda M/weyne Deni & wasiiro lagu dhegan yahay.
VIDEO: M/weyne Deni oo ka hadlay mowqifka Puntland ee doorashada Somalia & kulankii beesha caalamka.
Axmed Karaash oo ka guurey agagaarka madaxtooyada lana wareegey dhisme cusub oo lagu kordhiyey madaxtooyadii hore.
Qaramada Midoobey oo farriin u dirtay madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada.
DAAWO-Dowladda Somalia oo hadda cayrisay safiirkii Kenya una yeeratay danjirihii u fadhiyey Nairobi.
DEG DEG: Dowladda Somalia oo cayrinaysa safiirka Kenya xiriirkana u jaraysa dalkaasi iyo sababta.
XOG: M/weyne Qoorqoor oo go’aan ka qaatay doorashada Somalia kadib cadaadiska mucaaradka & dalabkii Farmaajo.
DFS oo dowlad goboleedyada ku eedaysay dibudhaca doorashada.
Mid kamid ah musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo xabsiga loo taxaabay.